घरमा लक्ष्मीको बास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? घरमा राख्नुहोस् यी चिज – live 60media
घरमा लक्ष्मीको बास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? घरमा राख्नुहोस् यी चिज
१. घरमा राख्नुहोस् बासुरी:
२. भगवान गणेशको नृत्य गरेको मुर्ति:
३. घरको मन्दिरमा राख्नुहोस् लक्ष्मी र कुबेरको मुर्ति या तस्बिर:
४. घरको मन्दिरमा शंख राख्न शुभ हुन्छ:
← सार्वजनिक यातायातः मापदण्ड पालना गर्दैनन्, भाडा मात्र बढाउँछन्
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६२६ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म १३ हजार ७५४ पुगेको छ । →